Filtrer les éléments par date : vendredi, 16 novembre 2018
vendredi, 16 novembre 2018 19:53
Résultat 16 novembre 2018 à 19h
Miakatra hatrany i 12, tsy ahitana fiovana firy intsony i 13 sy 25 na somary mihemotra aza, samy latsaky ny 40% raha 992 sisa ny BV tsy vita. Nihena ny elanelana eo amin'ny 13 sy 25, vato 209 876.
BV traités: 23860 / 24852 soit: 96.01%
Inscrits: 9465560 / 9913599
Suffrages exprimés: 4745378
Taux de participation: 54.12%
12= 8.81% (8.84% à 15h)
13= 39.37% (39.53% à 15h)
25= 34.94% (34.63% à 15h)
vendredi, 16 novembre 2018 15:58
Résultat 16 novembre 2018 à 15h
Miakatra hatrany i 12, tsy ahitana fiovana firy intsony i 13 sy 25 na somary mihemotra aza, samy latsaky ny 40% raha 1 482 sisa ny BV tsy vita. Mitombo kosa ny elanelana eo amin'ny 13 sy 25, satria dia mitarika 226 637 ny vato azon'ny 13.
Ny tahan'ny fahavitrihin'ny mpifidy dia mijanona ho 54% hatrany, izany hoe eo amin'ny 5 353 343 no heverina fa tonga nifidy. Mila mahazo 50% + 1 amin'io anefa raha tiana ho lany 1er tour. Izany hoe mila mahazo 2 676 671. Izany hoe mila mahazo elanelam-bato 1 000 000 amin'ny kandida faharoa ny voalohany. Nefa efa vato 725 152 sisa no mbola hifampizaran'izy 36 kandida.
Arak'izany, tsy hisy fiovana firy intsony io vokatra io, fa dia i 13 sy 25 no hiditra 2e tour.
vendredi, 16 novembre 2018 10:14
Résultat 16 novembre 2018 à 08h
Miakatra moramora i 12, tsy ahitana fiovana firy intsony i 13 sy 25 na somary mihemotra aza, samy latsaky ny 40%, raha 2 172 sisa ny BV tsy vita, ny CENI moa dia milaza fa mahavita 3500 BV ao anatin'ny 1 andro.
Azo vinaniana ho vita androany izany io vokatra io, ary mety rahampitso no amoahan'ny CENI ny vokam-pifidianana vonjy maika, raha ny resaka nandeha hoe amin'ity faran'ity herin'andro ity.
vendredi, 16 novembre 2018 09:56
SAVA: Faritra mena amin’ny fandalovan'ny rivodoza isan-taona
Voafidy manokana hanaovana atrik’asa hisorohana ny tsy fahampian'ny rano fisotro madio aorian’ny fandalovan’izany rivodoza na
mety ho ranobe izany ny eto Sambava, ka mba ho fotodrafitr’asa mahatanty izany no apetraka eto, izay hanofanana ireo orinasa ato amin'ny Faritra SAVA ary ireo ‘’bureau d’étude’’ izay manao fanadihadiana mialohan’ny tetik’asa.
Nilaza ny Lehiben’ny Faritra Velomaro Faustin mba tsy ho hita aty SAVA intsony ny firaisana tsikombakomba amin’ireny mpanome tetik’asa mitaky ampahafolony amin'ireo izay hanao ny asa ireny, satria raha tsy foana io dia ho ratsy fototra ny asa, ratsy ny kalitao ka aoka izay ny kolikoly.
Nanomboka omaly ny atrik’asa ary haharitra hateloana.
Ireo avy ao amin’ny CPGU (Cellule de Prévention et Gestion des Urgences ) ao amin’ny Primatiora no mitarika izany amin’ny alalan'ny Sekretera mpanatanteraka, Général de Brigade Aérienne Razakanaivo Maminirina.
vendredi, 16 novembre 2018 09:43
Zandry: Ny hendry no hanarina
Na nisaraka aza ny lalantsika, toy ny fanaoko dia milaza ny hevitra aho ahatsara ny Firenentsika iombonana, raha misy ny mety, dia raiso, raha tsy mitovy ny fijery dia tsy misy olana, samy manohy ny lalany hatrany.
Ianao izao ry Zandry kely no mitarika amin'ny vokam-pifidianana, tsy ianao no atoro fa io fitiavan'ny olona io mety mora mivadika.
Aza lany andro amin'io vokam-pifidianana io, ny CENI tsy hiova hevitra, ny HCC tsy anebaka an'i CENI. Mety misy ireo tsy lavorary, ianareo no tao, ary anao no PM amin'izao, tsy afaka ianao amin'io tsy fanjariana io.
Jereo i Dada, fetsy, tsy miteny izy, manao hendry be daholo ny zanaky Dada, ny azy efa mandeha, efa miaraka amin'ny Baréa izy, ianao mbola endrik'olona be ady amin'ny vokam-pifidianana, ny manodidina anao manao ady an-tsena eny amin'ny radio sy FB, milelalela may vava.
Tandremo fa tsy ampy ahalany anao 2e tour ny vaton'ireo fanatika, ilainao ny vaton'ireo tsy nandeha nifidy, ireo nanao vato fotsy, aza adino fa 3e position izy ireo. Ireo tsy nandeha nifidy efa tsy andeha koa amin'ny 2e tour, fa ireo misalasala no ilainao, nefa ireny tsy tia gidragidra izany.